I-Samba: I-SmbClient | Kusuka kuLinux
Sanibonani zihlobo !. Siyaqhubeka nochungechunge olumayelana neSamba futhi namhlanje sizobona iphakethe smbclient, esisinikeza ngochungechunge lwamathuluzi wokufinyelela izinsiza ezabiwe kumaseva we-Microsoft Windows ne-Samba.
Hlala ukhumbula ukuthi sinikela Indawo Yokungena ezinhlelweni noma izinsizakalo esibhala ngazo. CHA Sihlose ukufaka esikhundleni semibhalo eningi, kepha kaningi, esinayo ezandleni zethu ezinqolobaneni zohlelo. Kungakho sihlala sikusho lokho, ukuthola eminye imininingwane, indoda, noma sincoma ukuthi ufunde imibhalo ehambisana nayo, NJALO PHAMBI KOKUSESHA I-Intanethi. Kubi kakhulu ukuthi imibhalo eminingi etholakala ezinqolobaneni ingeyesiNgisi. Njengamanje sinenqwaba ye-Free Software eyenziwe izinkulungwane zabathanda. Okuncane esingakwenza ukukwenza ukufunda nokutadisha okuncane ngokuthi singakusebenzisa kanjani. Nginesiqiniseko sokuthi ingxenye yethu iyona edinga umzamo omncane.
Ngaphambi kwesikhathi, ngiyaxolisa nganoma ikuphi ukushiyeka okungalungile noma amaphutha. Ukubhala ngeSamba Suite kuwumsebenzi onzima kakhulu, noma ngabe kungumyalo ovela kuyo kuphela.
Ngaphambi kokuqhubeka, sincoma ukufunda:
I-Samba: Kudingeka isingeniso
Dlulisa amehlo kunethiwekhi ye-SMB / CIFS ngaphandle kwe-Samba
Izilungiselelo zefayela /etc/resolv.conf
Isingeniso esigcinweni somlando /etc/samba/smb.conf
Iphakheji smbclient Singayifaka ngeSynaptic noma ngomugqa womyalo. Njengoba izimpande senza ku-console:
ukufaneleka show smbclient ukufaneleka ukufaka smbclient
Qaphela ukuthi amaphakheji nawo afakiwe i-samba-evamile y i-samba-common-bin. Uhlelo lweSamba olunjalo alufakiwe, noma kunjalo I-SmbClient IF ingeyeSamba suite.
3 Ukulungiswa kufayela le / /etc/resolv.conf
4 Isingeniso kufayela le /etc/samba/smb.conf
5 Isebenzisa i-SmbClient
Iphakethe lisinikeza amathuluzi alandelayo:
findmb: Uhlunga imininingwane ngamakhompyutha aphendula umbuzo wegama le-SMB ku-subnet.
smbclient: Iklayenti elifana ne- ftp ukufinyelela izinsizakusebenza ezabiwe kumaseva we-SMB / CIFS.
smbget: Insiza efana ne-wget ukulanda amafayela kusuka kumaseva we-SMB.
smbtar: Isikripthi seConsole esisebenza ku-SmbClient esivumela ukuthi senze amakhophi wesipele wezinsizakusebenza ze-SMB / CIFS ezabiwe ngqo kusiqophamazwi ku-UNIX.
zandisileIthuluzi lokwenza ohlangothini lwekhasimende imisebenzi ye-MS-RPC noma Inqubo Yesilawuli kude ye-Microsoft. Imininingwane engaphezulu kusizo lweWindows.
smbspool: Ithumela ifayela kuphrinta ye-SMB.
smbtree: Uhlu noma Isiphequluli I-SMB kumodi yombhalo. Ifana ne- "Network Neighborhood" yama-Windows computer. Iphrinta isihlahla ngazo zonke izizinda ezaziwayo, amaseva esizindeni ngasinye, nezinsizakusebenza zabo ezabiwe.
smbcaclsIthuluzi lokukhohlisa Uhlu Lokulawulwa Kokufinyelela kwe-NT kumafolda noma amafayela abiwe wohlobo lweSMB.
smbcquotas: Umbuso wokuphatha ama-Quotas (Ama-Quotas) kuma-SMB amasheya.
Ngokwengxenye yayo i-samba-common-bin isinikeza izinhlelo ezilandelayo:
net: Umbuso okhulelwe ukusebenza njengohlelo «net»Amawindi. Kuyithuluzi lokuphatha amaseva we-Samba namaseva we-CIFS akude.
nmblookup: I-NetBIOS ngaphezulu kweklayenti le-TCP / IP elisetshenziselwe ukubheka igama le-NetBIOS.
smbpasswd: Umyalo osivumela ukuthi sishintshe iphasiwedi ye-SMB yomsebenzisi.
testparm: Umbuso osisiza ukubheka i-syntax yefayela eliyinhloko lokucushwa kwe-Samba smb.conf.
Kuyo yonke imiyalo engenhla, mathupha ngiyisebenzise kakhulu testparm, smbclient, smbtree, net y smbpasswd. Kungaba i-athikili ende ngokwedlulele, futhi futhi eyisicefe, ukuhlanganisa wonke umuntu othintekayo.
Ukuhlola i-SmbClient, senze i-LAN encane ngemishini elandelayo:
w2003I-Main Domain Controller ku-Windows 2003 SP2, i-Enterprise Server, enikezela ngezinsizakalo ze-DNS ne-WINS. Igama lesizinda ngu abangani.cu. Abasebenzisi ababhaliswe kusizinda yibo: elrond, i-legolas, ipayipi y igxathu. :-). Kule seva sinayo ifolda eyabelwe mhlaba ophakathi, esinikeze izimvume zokufunda kuzo igxathu bese ufunda - bhalela ipayipi. Umsebenzisi elrond Ungumphathi wesizinda futhi.
miwheezy: Umshini one-Debian 7.0 "Wheezy", lapho sizofaka khona iphakheji smbclient.
okuqondileIthimba eline-Ubuntu 12.04 Server LTS ne-Gnome-Shell, lapho sizofaka khona iphakethe le-SmbClient. Sijoyina leli thimba kusizinda se-amigos.cu, ukuze abasebenzisi ababhaliswe kusizinda baqale iseshini yasendaweni. Ngakho-ke, une-akhawunti yomshini kusilawuli sesizinda. Yena kwenziwa kanjani ukuxhumanisa iDebian noma i-Ubuntu neMicrosoft Directory Directory, sizobona endatshaneni ezayo.
Kubaluleke kakhulu ukuthi simemezele i-DNS kahle, ikakhulukazi uma sine-LAN ene-Microsoft Domain Controller. Esibonelweni sethu, i-IP ye w2003.anime.cu Ungu-10.10.10.30. Ngakho-ke, ifayela /etc/resolv.conf izosala nokuqukethwe okulandelayo:
sesha abangani.cu nameserver 10.10.10.30
Uma kwenzeka singenayo i-Network-Manager-GNOME efakiwe, ngokwesibonelo, kuseva, ngeke kulimaze ukumemezela kahle imingcele yangaphambilini efayeleni / njll / inethiwekhi / ukuxhumana.
I-DNS efakwe lapho silungiselela i-Domain Controller eMicrosoft, inochungechunge oluphelele lwamarekhodi angeziwe, azihlanganisa kakhulu nemisebenzi ye-Active Directory.
Noma yikuphi ukuqaphela esikuthathayo kuvumelekile ukuze iSamba isebenze kahle futhi akudingeki siphule amakhanda ethu ngenxa yamaphutha wokumisa esikwazile ukuwagwema.
Isingeniso kufayela le /etc/samba/smb.conf
Lapho sifaka iphakheji smbclient, ifayela eliyinhloko lokumiswa kwe-Samba Suite lenziwe: smb.conf.
Njalo yenza ikhophi eyisipele yefayela NGAPHAMBI kokushintsha noma isiphi isici.
Yize usizo lungesiNgisi, sincoma ukuthi ULUFUNDE NGOKUQINISEKILE ngaphambi kokuzama ukushintsha noma iyiphi ipharamitha.
Uma ungasazi nhlobo isiNgisi, sicela ushintshe kuphela okuboniswe ezincwadini ezahlukahlukene, kufaka phakathi le ndatshana.
smb.conf Inolwazi lokucushwa kwesikhathi sokusebenza sezinhlelo zeSamba Suite. I-syntax yayo ihlolwe ngumyalo testparm. Njengakwi-athikili yamuva sizobona okuningi ngaleli fayela, okwamanje sizozikhawulela ekuboniseni ushintsho oluncane oludingekayo okufanele silwenze kulo, esimweni somshini oneDebian noma Ubuntu nokuthi ayijoyinanga kunoma yisiphi isizinda. Izinguquko zigqanyiswa ngokugqamile.
[global] # # Ukuphequlula / Ukuhlonza # # # # Shintsha lokhu kuqembu lomsebenzi / igama lesizinda se-NT isiphakeli sakho se-Samba sizoba yingxenye yeqembu lomsebenzi = BANGANI
# umucu wesiphakeli ulingana ne-NT Incazelo yensimu yensimu yensimu =% h iseva # Igama le-Inthanethi Legama Le-Windows Service Serving Support: # WINS Support - Itshela ingxenye ye-NMBD yeSamba ukunika amandla i-WINS Server yayo # iwina support = no # WINS Server - Tells izingxenye ze-NMBD ze-Samba ukuze zibe iKlayenti le-WINS # Qaphela: I-Samba ingaba yi-WINS Server, noma i-WINS Client, kodwa HHAYI zombili; iwina iseva = wxyz
iwina iseva = 10.10.10.30
### UKUSELE KWAMAFAYILI KUHLALE KUNGAGUQUKILE
Lokho wukuthi, izinguquko ezenziwe zizoba kumapharamitha iqembu lokusebenzela y iwina iseva kuphela. Abanye bazozibuza ngokusetshenziswa kweWINS. USamba uncoma kakhulu ukusetshenziswa kwale nsizakalo kumanethiwekhi e-SMB / CIFS, ukuze i-IP yamagama eNetBIOS ixazululwe kahle. Noma kufakwa iSamba Domain Controller, kufayela le- smb.conf ukumisa i-daemon ye-NMBD itshelwa ukuthi isebenze njengeseva ye-WINS, ngokusebenzisa ipharamitha iwina support = yebo, okungadingekile esimweni sethu esithile.
Sihlola i-syntax yefayela le-smb.conf:
Layisha amafayela we-smb config kusuka /etc/samba/smb.conf rlimit_max: ukwandisa i-rlimit_max (1024) kuya kumkhawulo omncane weWindows (16384) Isigaba sokucubungula "[amakhaya]" Isigaba sokucubungula "[amaphrinta]" Isigaba sokucubungula "[phrinta $]" Kulayishiwe services KULUNGILE. Indima yeseva: ROLE_STANDALONE
Cindezela u-enter ukuze ubone ukulahla izincazelo zensizakalo yakho [global] groupgroup = string Friends server =% h server map to guest = User Bad obey pam pam vikwazo = Yebo pam password change = Yes passwd program = / usr / bin / passwd% u passwd chat = * Enter \_ snew \_ s * \_ spassword: *% n \_ n * Thayipha kabusha \_ snew \_ s * \_ spassword: *% n \_ n * password \_ supdated \_ ss ngempumelelo *. i-unix password sync = Yebo syslog = 0 log file = /var/log/samba/log.%m max log size = 1000 dns proxy = No wins server = 10.10.10.30 abasebenzisi babelana bavumela izivakashi = Yebo panic action = / usr / share / samba / ukwethuka-isenzo% d idmap config *: backend = tdb [.....]
# # Uma sikwenza ku-precise.amigos.cu, eyayikade ihlanganiswe # # kusizinda se-bangani.cu, okukhiphayo kwehluka ngo- # # kancane
strides @ ngqo: ~ $ testparm
Layisha amafayela we-smb config kusuka /etc/samba/smb.conf rlimit_max: okwandisa i-rlimit_max (1024) kuya kumkhawulo omncane weWindows (16384) Ifayela lezinsizakalo ezilayishiwe KULUNGILE. Indima yeseva: ROLE_DOMAIN_MEMBER
Cindezela u-enter ukuze ubone ukulahla izincazelo zensizakalo yakho [global] workgroup = AMIGOS realm = AMIGOS.CU security = ADS os level = 0 local master = No master master = No template shell = / bin / bash winbind enum users = Yebo winbind enum amaqembu = Yebo winbind sebenzisa isizinda esizenzakalelayo = Yebo idmap config BCTUK: range = 10000000-19000000 idmap config BCTUK: backend = rid idmap config *: range = 11000-20000 idmap config *: backend = tdb
Lapho izinguquko sezenziwe, akudingeki ukuqala kabusha noma iyiphi insizakalo futhi sesikulungele ukusebenzisa umyalo smbclient.
I-SmbClient ngokuyisisekelo umyalo we-console. Ngakho-ke sizoyisebenzisa.
Faka iphasiwedi ye-xeon: ukusethwa kweseshini kwehlulekile: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
Umphumela onengqondo we # #, ngoba i-xeon ayisiyena umsebenzisi obhalisiwe ku-Domain
xeon @ miwheezy: ~ $ smbclient -L w2003 -U igxathu
Faka iphasiwedi ye-trancos: Domain = [FRIENDS] OS = [Windows Server 2003 3790 Service Pack 2] Server = [Windows Server 2003 5.2] Sharename Type Comment --------- ---- ------ - Isabelo esizenzakalelayo se-C $ Disk IPC $ IPC Remote IPC ADMIN $ Disk Admin Remote Admin SYSVOL Disk Logon server share
I-Middle Earth Disk
I-NETLOGON Disk Logon server share Domain = [FRIENDS] OS = [Windows Server 2003 3790 Service Pack 2] Server = [Windows Server 2003 5.2] Amazwana Weseva --------- ------- PRECISE Samba 3.6.3 .2003 W2003 Mastergroup Master --------- ------- ABANGANE WXNUMX
# # Bheka i-tierramedia yomthombo owabelwene
Faka iphasiwedi ka-elrond: Domain = [FRIENDS] OS = [Windows Server 2003 3790 Service Pack 2] Server = [Windows Server 2003 5.2] smb: \_> dir NT_STATUS_ACCESS_DENIED listing \_ * smb: \_> exit
## Kunengqondo !!!. Yize u-elrond engumphathi, akanazo izimvume kulowo mthombo.
xeon @ miwheezy: ~ $ smbclient // w2003 / middle earth -U kuyathuthuka
Faka iphasiwedi ye-trancos: Domain = [FRIENDS] OS = [Windows Server 2003 3790 Service Pack 2] Server = [Windows Server 2003 5.2] smb: \_> dir. D 0 Sat Jul 20 16:58:54 2013 .. D 0 Sat Jul 20 16:58:54 2013 Pipin's folder D 0 Sat Jul 13 13:01:46 2013 Hawaii.Five-0.2010.S01E01.HDTV.XviD. Avi A 366793752 Tue Sep 21 22:51:12 2010 Hawaii.Five-0.2010.S01E01.HDTV.XviD.srt A 63362 Wed Sep 22 14:03:40 2010 40915 amabhlogo osayizi 262144. 29215 amabhulokhi atholakalayo smb: \_> mkdir test I-NT_STATUS_ACCESS_DENIED yenza umkhombandlela wesilawuli kude \_ test smb: \_> exit
## Khumbula ukuthi iminyakazo inezimvume zokufunda kuphela
xeon @ miwheezy: ~ $ smbclient // w2003 / middle earth -U ipayipi
Faka iphasiwedi ye-pipin: Domain = [FRIENDS] OS = [Windows Server 2003 3790 Service Pack 2] Server = [Windows Server 2003 5.2] smb: \_> dir. D 0 Sat Jul 20 16:58:54 2013 .. D 0 Sat Jul 20 16:58:54 2013 Pipin's folder D 0 Sat Jul 13 13:01:46 2013 Hawaii.Five-0.2010.S01E01.HDTV.XviD. Avi A 366793752 Tue Sep 21 22:51:12 2010 Hawaii.Five-0.2010.S01E01.HDTV.XviD.srt A 63362 Wed Sep 22 14:03:40 2010 40915 amabhlogo osayizi 262144. 29215 amabhulokhi atholakalayo smb: \_> mkdir try smb: \_> dir. D 0 Sun Jul 21 14:21:30 2013 .. D 0 Sun Jul 21 14:21:30 2013 Ifolda kaPipin D 0 Sat Jul 13 13:01:46 2013 Hawaii.Five-0.2010.S01E01.HDTV.XviD. Avi A 366793752 Tue Sep 21 22:51:12 2010 Hawaii.Five-0.2010.S01E01.HDTV.XviD.srt A 63362 Wed Sep 22 14:03:40 2010 test D 0 Sun Jul 21 14:21:30 2013 40915 amabhlogo usayizi 262144. 29215 amabhulokhi atholakalayo smb: \_>? ? ingobo yomlando ye-allinfo altname blockize khansela icala_sensitive cd chmod chown close del dir du echo exit get getfacl geteas hardlink help history iosize lcd link lock lowercase ls l mask md mget mkdir more mput newer open posix posix_encrypt posix_open posix_mkdir posix putripdir putwdir printout putwlinkd rd recurse reget rename reput rm rmdir showacls setmode stat symlink tar tarmode translate unlock volume vuid wdel logon listconnect showconnect ..!
# # Uhlu lwemiyalo nangaphansi, usizo kumyalo # # Khumbula ukuthi i-smbclient ifana neklayenti le-ftp.
smb: \_> siza ukuthola USIZO uthole: [igama lendawo] thola ifayela smb: \_> exit
inani eliphelele lama-68 drwxr-xr-x 2 xeon xeon 4096 Jul 13 12:56 Desktop -rw-r - r-- 1 xeon xeon 63362 Jul 21 14:24 Hawaii.Five-0.2010.S01E01.HDTV.XviD.srt
# # Ngokuphumelelayo, ifayela le-srt likopishelwe kufolda OKUSUKA ESIMENELE KUYONA ## isimbonisi.
inani eliphelele le-420 drwxr-xr-x 2 xeon xeon 4096 Jul 13 12:56 Desktop -rw-r - r-- 1 xeon xeon 63362 Jul 21 14:24 Hawaii.Five-0.2010.S01E01.HDTV.XviD.srt -rw - r - r- 1 xeon xeon 359814 21 Jul 14 30:XNUMX samba.man
Faka iphasiwedi ye-pipin: Domain = [FRIENDS] OS = [Windows Server 2003 3790 Service Pack 2] Server = [Windows Server 2003 5.2] smb: \_> put samba.man put file samba.man as \_ samba.man (10980,6 kb / s) (isilinganiso esingu-10980,7 kb / s) smb: \_> dir. D 0 Sun Jul 21 14:31:36 2013 .. D 0 Sun Jul 21 14:31:36 2013 Pipin's folder D 0 Sat Jul 13 13:01:46 2013 Hawaii.Five-0.2010.S01E01.HDTV.XviD. Avi A 366793752 Tue Sep 21 22:51:12 2010 Hawaii.Five-0.2010.S01E01.HDTV.XviD.srt A 63362 Wed Sep 22 14:03:40 2010 test D 0 Sun Jul 21 14:21:30 2013 samba. Man I-359814 Sun Jul 21 14:31:36 2013 40915 block of size 262144. 29213 block block smb: \_> phuma
## Manje ake sizame umyalo we-smbtree
Faka iphasiwedi ye-xeon: ABANGANE \_\_ W2003 \_\_ PRECISE Samba 3.6.3 \_\_ PRECISE \_ IPC $ IPC Service (Samba 3.6.3)
Faka iphasiwedi ye-legolas: AMIGOS \_\_ W2003 \_\_ W2003 \_ NETLOGON Logon server share \_\_ W2003 \_ tierramedia \_\_ W2003 \_ SYSVOL Logon server share \_\_ W2003 \_ ADMIN $ Remote Admin \_\_ W2003 \_ IPC $ Remote IPC \_\_ W2003 \_ C $ Isabelo esizenzakalelayo \_ PRECISE Samba 3.6.3 \_\_ PRECISE \_ IPC $ IPC Service (Samba 3.6.3)
## Bheka ukuphuma ngabasebenzisi ababhalisiwe nabangabhalisiwe
Kuhlala kunconywa ukusebenzisa imiyalo ngeziqinisekiso zomsebenzisi obhaliswe kusizinda noma ngabe ikhompyutha yeklayenti ayijoyinwanga kusizinda. Vele kufanele sazi ubuqiniso bokuqinisekiswa kwalowo msebenzisi noma sibe ne-akhawunti yethu yomsebenzisi esizindeni.
Kusuka kokungenhla kulandela ukuthi AKUSONA ISIBOPHO UKUBA NAMAKHONI AMAKlayenti AHLANGANISWE KU-DOMAIN, ngaphandle kwalapho sifuna ukungena kwikhompyutha yeklayenti njengomsebenzisi wesizinda. Eqinisweni, indawo yami yokusebenza ayihlanganisiwe kusizinda senkampani yami.
Imiyalo uthole y wafaka basebenza kusuka kusabelo kuya kufolda yasendaweni noma kumshini wamakhasimende lapho i-smbclient icelwe khona.
Ukwazi yonke imiyalo yangaphakathi ye- smbclient, kufanele sithayiphe uphawu lombuzo ?.
Uma senza imisebenzi efanayo yangaphambilini kusuka kwikhompyutha ejoyine ngaphambilini kusizinda, imiphumela izofana. Sikubheka ku- eqondile.amigos.cu.
Ukusebenzisa i-SmbClient kudlulela ngalé kwalokho esikubonile ku-athikili. Sizokubona kokuthunyelwe okuzayo.
Yize iqine kumathwasa amaningi, iSamba Suite idinga isifundo somuntu siqu. Akuzona zonke izimpendulo ezisezihlokweni eziseWWW Village. Futhi eziningi zazo zisolimini lweShakespeare.
Ungadangali ngephutha lokuqala. Uma sifunda ukusebenzisa iSamba Suite, sizofunda okuningi ngamanethiwekhi we-SMB / CIFS futhi ikakhulukazi, ngamanethiwekhi we-Microsoft.
Ekugcineni, sebenzisa iNautilus noma esinye isiphequluli sefayela smb: // pipin @ w2003 / umhlaba ophakathi, ukusungula ukuxhumana kuleyo nsiza. Zama ukuvula ifayili .avi nge-VLC bese kuba ne-Totem. Thola iziphetho zakho.
Futhi lokho okwanamuhla, bangane. Kuze kube i-adventure elandelayo !!!.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Samba: SmbClient
Nginombuzo, lungiselela i-samba ku-Debian 7, kepha uma ngifaka ifolda eyabiwe ngidinga ukuthi ngibuze njalo iphasiwedi, ngikwenza kanjani?
Ngabe ifolda yabiwe ku-Wheezy uqobo noma kukhompyutha ekude? Uma kwabelwana ngayo eqenjini noWheezy, ubukade uhamba ngaphambi kwama-athikili amaningi. 🙂
Ngempela ifolda yabiwe ku-Wheezy
U-Antonio Galloso kusho
Okuthunyelwe okuhle kakhulu, ngisebenzisa i-smbpasswd ukushintsha iphasiwedi esizindeni seWindows futhi ngifinyelele umbono wami ovela enkampanini nge-firefox, kepha angisebenzisi ama-winbugs.
i-smbpasswd -r domain-here -U umsebenzisiID-lapha
Phendula u-Antonio Galloso
Siyabonga ngokuphawula !!!
Ama-vibes amahle u-Antonio !! Kunemininingwane eminingi kuwebhu ephathelene ne-samba, kepha ngiphawula lokhu ngamabhukhimakhi. Ukubingelela okuvela eningizimu.
Izinto zekhwalithi, into engabonakali nsuku zonke nangaphansi ngale ndlela.
Ngibonga nje 😀
Isifundo sihle kakhulu, yize nginokungabaza ukuthi sizohambisana noma cha nezinguqulo zeWindows Server ezine-kernel 6.X (Server 2008 neServer 2012, ngokulandelana).
Sanibonani @eliotime !!!. Ngokuzama akukho okulahlekile. Umbandela omuhle weqiniso umkhuba. Manje, uma ngingaphazami, inguqulo ka-2003 yeLan Manager ingu-5.0. Uyazi ukuthi iMicrosoft ikunikeza ukuphepha okuncane ukushintshanisa nobumnyama. Ngicabanga ukuthi uma iMicrosoft ibicubungula ngokungathi sína ukusebenzisana emuva, kufanele isebenze ngokufanayo kumaseva ka-2008 nango-2012.
Manje ngiyazibuza ukuthi kulezi zikhathi zesimanje zeLinux, kuyadingeka yini ukusebenzisa iWindows Windows noma i-2008 Servers, ukuhlinzeka ngezinsizakalo kwi-Enterprise LAN?. Qaphela ukuthi angisho ngeWWW Village !!! 🙂
Isihloko esihle somngani, into enjengale ayibonwa ngemininingwane nsuku zonke.
Ngikuthandile lokhu futhi ngizokugcina, ukukubuyekeza ngokuzola lapho nginesikhathi.
Ngiyabonga nonke ngemibono yenu !!!.
Sawubona, i-athikili nalo lonke uchungechunge lwe-samba muhle kakhulu!
Nginezinkinga ezithile zokuzama ukuxhuma kumafolda abelwe kanye namaphrinta ku-win8, kusukela samba 3.4.9.
Inkinga ukuthi inginikeza umyalezo (ngisebenzisa -d 7 ukulungisa iphutha kulayini womyalo we-smbclient) othi:
Ukungena ngemvume kwe-SPNEGO kwehlulekile: ipharamitha engavumelekile
Hhayi, angiqondi kahle ukuthi kufanele senzeni
ukumisa kahle i-SPNEGO.
Ukusekelwa kwe-SPNEGO kufakiwe kwe-Samba version 3.6.0. Ku-Debian 7 "Wheezy" inguqulo yeSamba ingu-3.6.6-6, ngenkathi ku-Ubuntu 12.04 "Precise" ingu-3.6.3-2ubuntu2. Kokubili kusekela i-SPNEGO.
Ukuxoxisana okulula nokuvikelwe kwe-GSS-API (SPNEGO)
Inhloso yeprothokholi ye-SPNEGO ukuvumela iklayenti neseva ukuthi baxoxisane ngendlela yokuphepha yokuqinisekisa. Izidingo okufanele zifezekiswe yi-protocol zikhonjisiwe ku-RFC2478, futhi zisebenzisa "amathokheni" njengoba zakhiwe ngokwesincomo se-ASN.1 DER. I-DER isho «Imithetho Efihlekile Yokufaka ikhodi» noma Imithetho Efihlekile Yokufaka ikhodi. Babhekisa ochungechungeni lwemithetho yokwakha okufakwayo kanambambili ngendlela ezimele kungxenyekazi esetshenzisiwe. USamba usekela iSPNEGO.
qeda ngokuguqula i-smb.conf ngomugqa:
ukusetshenziswa kwamakhasimende spnego = cha
bese ukuxhumana kugeleza ngokujwayelekile phakathi kwesamba / izinkomishi ne
iphrinta eyabiwe ku-Windows8.
Njengoba ungitshela, ukwesekwa okugcwele kwe-spnego kuvela ku-samba 3.6
futhi ngisebenzisa i-samba 3.4.9 ... ngakho-ke nginqume ukungasebenzisi i-spnego kusuka kuseva ye-samba
(esebenza njengeklayenti ngephrinta ku-win8).
sawubona mngani ngine-samba vesion 3.0.33-3.40.el5_10
futhi ayingixhumi emshinini onewin8.1 🙁
Ngizamile ukwengeza ulayini we-spnego futhi awusebenzanga, ungangisiza ngiyabonga
Ngiyabonga uzakwethu 😉
Bengifuna ukukubuza okuthile okuncane uma kungeyona inkathazo, ngizokutshela.
Okokuqala iziqondisi zokufunda i-samba kancane kancane zikhulu impela, futhi yize ngingaqondanga konke (ngoba ungasho ukuthi ngingu-newbie endabeni yamanethiwekhi hahaha), ngifunde okuningi, ngakho-ke okokuqala ngifuna ukukutshela ukuthi zilungile!
Umbuzo yilokhu okulandelayo, njengoba ngikutshelile ngamanethiwekhi, ngiyaqonda okuyisisekelo, ngiyazi ukubala amanethiwekhi kuma-binary, ama-subnet, isihloko semigwaqo, njll. (Manje sengiqhuba ekilasini ngesihloko seCisco Packet I-Tracer, uma ngabe uyayazi hahaha), kepha ngifuna ukufunda kabanzi, ngoba ngiyakuthanda kakhulu ukuxhumana nabantu.
Ungangeluleka kuphi ukuthi ngiqale ukufunda ukuze ngifunde kabanzi? Ngingathanda ukuqonda kangcono isihloko seSamba!
Ukubingelela nokubonga ngesikhathi sakho!
Ngiyabonga ngokufunda izindatshana zami nangokuhlola kwakho! Ngicabanga ukuthi kufanele uqale uzibuze ukuthi uzozinikela yini kuma-Enterprise LANs noma kolunye uhlobo, noma kwi-WAN -Internet-, ngoba banokungezwani kwabo. Endabeni yami ngazi okuncane ngamaBusiness Networks, futhi ngigxila kuma-athikili ami kuwo njengoba ubona uma uvakashela amanye https://blog.desdelinux.net/author/fico, noma ungene http://humanos.uci.cu/author/federico. Uma uthatha isinqumo kuma-Enterprise LANs, indawo enhle yokuqala ukubhalwa nguJoel Barrios Dueñas "Ukucushwa Kweseva ngeGNU / Linux" ku http://www.alcancelibre.org.
Lokho ngukuncoma kwami ​​nokuzithoba.
Ngiyabonga kakhulu ngokuphendula umbono wami!
Bengilokhu ngicabanga, futhi ngicabanga ukuthi ngingathanda ngempela ukuzinikela ku-Enterprise LAN, yize ngingenzanga isinqumo esiqinile okwamanje, kodwa ngicabanga ukuthi ngithanda ukuqala ukufunda ngakho.
Ngakolunye uhlangothi, bengilokhu ngibheka izixhumanisi onginike zona, ikakhulukazi eyokugcina, futhi ngilande incwadi ekuCwangcisweni Kweseva ngeGNU / Linux, kubonakala njengesincomo esihle kakhulu ukuqala ngaso, ngibheke inkomba futhi ngikholelwa impela ukuthi ngingafunda okuningi ngisho nangaphandle kokwazi okuningi ngale ndaba, ngakho-ke sengiqalile ukuyifunda!
Ngiyabingelela futhi ngiyabonga kakhulu ngezeluleko / impendulo yakho !!
ngine-samba ubuntu 1504 njengeseva yohlelo lokusebenza ku-foxproxw ne-samba. kepha lapho umsebenzisi ovela kuhlelo lokusebenza eyala ukuba aprinte, kuvela i-cmd console futhi ayiphrinti lutho.
Mngani ngithemba ukuthi ungafunda ukungikhathaza kwami ​​ukuthi bengizama izinsuku eziningi ukukwazi ukwabelana ngefayela le-squid3 eliku-var / log / squid3 ukuze ngikwazi ukulungisa i-sawmill kuleyo ndlela okusho ukuthi kummeleli wami naku ngikwazi ukuhlaziya umkhondo futhi bekungeke kwenzeke kimi. Ngiyachaza
Faka ummeleli ku-linux unbuntu 14.04 bese ufaka i-samba ukuze wabelane nabanye ngemikhawulo efanelekile, finyelela kufayela eliku-var / log / squid3 futhi ngizongena ku-squid access.log selokhu isarfamu lingibuza indlela kunethiwekhi kwelogi elizolifunda bese lenza ukuhlaziywa kwelogi elibambayo kepha selibe yi-odyssey futhi angazi ukuthi ngenzenjani njengoba ngisesizinda samawindows futhi angazi ukuthi ngenza kanjani lelo fayela kungabiwa
Ngithole kuphela insiza okwabiwe ngayo emawindini, ingicela ukudlula futhi lapho ngifaka umsebenzisi okholelwa ku-samba, ayingivumeli ngifinyelele ku-el
Ungenzenjani mngani wami?
Ngingakujabulela uma ungisiza ngokushesha okukhulu angazi noma ngingabuyela yini kuleli sayithi ngakho-ke ngishiya i-imeyili yami ngizoxhumana nayo
Ngifaka i-Ubuntu 18 endaweni yesizinda njenge- "member server", ngidinga amaklayenti eWindows ukuthi akwazi ukufinyelela ifolda eyabiwe kusuka ku-Ubuntu, esebenzisa iziqinisekiso zawo zesizinda.
Ngiyayibona insiza, kepha inika "imvume enqatshiwe" noma ngabe sengivele nginikeze ukufinyelela kufayela le-smb.conf
Phendula u-El blab